7 sheey ka ilaali qolkaaga jiifka si aysan dhibaato kuu soo gaarin — Maanfur
Home Maskax-fur 7 sheey ka ilaali qolkaaga jiifka si aysan dhibaato kuu soo gaarin
7 sheey ka ilaali qolkaaga jiifka si aysan dhibaato kuu soo gaarin
Waxyaabaha laga ilaaliyo qolka hurdada!
Qaxyaabaha laga ilaaliyo qolka hurdada | Image Credit: Brightside
Dadka qaar qolkooda jiifka waxay galaan xilliga ay hurdada u baahdaan kaliya, halka kuwo kalena ay qolkaas dhexdiisa ku qabsadaan howl-maalmeedkooda caadiga ah.
Waa laga yaabaa in ay caadi la tahay iyaga, laakiin haddii ay toddobadan sheey ka ilaalin waayaan qolka jiifka waxaa suuragal ah inay kasoo gaarto dhibaato aysan waligood ka fikirin.
Sababta ugu weyn ee dadka aysan kabaha guryaha ula galin waa dhinaca nadaafadda. Kabaheenna waxay xambaarsan yihiin bakteeriyo aad u badan iyo wasakh.
Wax walba oo saaran kabaha waxay ku hari karaan roogga wayna ku nagaan karaan halkaas, sidaas darteed inta badan guryaha gudahooda waa laga ilaaliyaa kabaha.
Laakiin dadka qaar ma heystaan meel kabaha la saarto, marka ay guriga imaadaanna way lasoo galaan, iyagoo xitaa la taga ilaa qolkooda jiirfka.
Waxa ugu fiican ee aad sameyn karto waa in kabaha aad ku bixiso albaabka kaddibna soo qaaddo oo dhigto meel aad ugu talogashay.
Iska ilaali inaad kabahaaga dhigto meel u dhow sariirtaada. Goobta aad seexaneysid waa in ay xor ka ahaato jeermis, mar walbana nadiif ahaato.
Xitaa haddii aadan raaci karin dhaqanka ku saabsan in kabaha laga ilaaliyo guriga guduhiisa, isku day in qolka jiifka uun aadan u dhaweynin.
2- Saacadda hurdada ka kicisa dadka ama telefoonka
Dadka qaar waxay saacadda alaarmiga ama telefoonka ku buuxiyaan waqtiga ay damacsan yihiin inay hurdada ka kacaan. Waxay ka cabsanayaan in ay hurdada ku daahaan iyagoo shaqo laga sugayo.
Laakiin cabsidaas waxaa ka weyn halista ay maskax ahaan kuu keeni karto qeylada alaarmiga, xilliga aad hurdeyso. Marka ay saacadda qeyliso waad kasoo argagaxeysaa hurdada.
Mararka qaarna habeen saq dhexe ayaad hurdada ka kaceysaa adigoo eegaya saacadda ama telefoonka, oo isweydiinaya inta saacadood ee aad jiiftay ama kaaga dhiman qeylada alaarmiga.
Taas waxay dhaawac si tartiib tartiib ah u sii weynaada ku abuureysaa maskaxdaada.
Waxa ugu habboon ee aad sameyn karto waa in aad xilli fiican sariirta tagto, durbana seexato. Isku day in aad qorsheysato ugu yaraan 8 saacadood oo hurdo ah ka hor inta aan la gaarin waqtiga aad qorsheyneysay inaad kacdo. Waa hubaal in marka aad jiifto 7 saacadood oo xiriir ah aad iskaa u kaceyso.
3- Sawirrada qoyska
Dhammaanteen waxaan jecel nahay inaan sawirrada qoyska ku heysanno guriga dhexdiisa, dabcan. Balse waxaa habboon inaan ka ilaalinno qolka hurdada.
Sababtoo ah haddii aad sawirrada qoyska eegto xilli saq dhexe oo habeennimo ah waxay kuu keeni kartaa walwal iyo fikir aan loo baahneyn. Taasna waa hubaal in au hurdada kaa celineyso.
Sidoo kale, mar walba oo aad aragto sawirradaas waxaad ka fikireysaa mas’uuliyadda kaa saaran dadkaas, waxaadna isweydiineysaa xaaladaha ay ku sugan yihiin waqti xaadirkaas.
Haddii sawirradaas ay yihiin dad qoyskaaga ka mid ahaa oo dhintayna, waxaa hubaal ah in markaad fikirkooda billowdo aadan seexaneynin.
Haddaba, ogoow qolka jiifka in uu yahay meel loogu talagalay adiga iyo haddii aad lamaane leedahay.
4- Qalabka jimicsiga
Qalabka jimicsiga boos weyn ayuu u baahan yahay, haddii aadan guri waasac ah lahaynna, way adag tahay inaad soo xareysato.
Laakiin waxaaba taas ka daran markii aad qolka jiifka geysto qalabka jimicsiga. Dhibka uu qolka hurdada u keenayo ma aha kaliya ciriiri balse waxaa kale oo la socda nafaad darro, kumana habboona inuu sariirtaada ku dhawaado.
Dhanka kale, haddii muddooyinkii ugu dambeeyay aad firaaqo u weysay ama si uun aadan u sameynin jimicsigii aad u baahneyd, qalabka oo qolka kuu dhex yaalla wuxuu ku xasuusinayaa arrintaas, kaddib waxaad dareemeysaa inaad khaldan tahay taasina waxay kuu horseedeysaa inay hurdada kaa xumaato.
5- Miiska shaqada
Inaad kala saarto shaqadaada iyo nasashadaada waa muhiim, gaar ahaan marka aad guriga kasoo shaqeyneyso – sida xilligan lagu jiro cudurka safmarka ah.
Haddii qolka jiifka uu kuu dhex yaallo miiskaaga shaqada iyo computer-kaaga waxaa laga yaabaa in aadan dareemin nasiino maadaama aad ka fikireyso mas’uuliyadda shaqo ee ku saaran.
Xalku waa in aad miiska shaqada geyso qolka fadhiga, halkaasna ugu tagto marka aad hurdada iyo nasiinada soo dhammeysato.
6- Buugaagta aadan aqrinin
Waxaa jura dad aad u badan oo buugaagta ka dhigta wehel islamarkaana jecel wax aqriska.
Dadka qaar xitaa waxay balwad ka dhigtaan inay buugaagta aqristaan marka ay guriga joogaan, waxayna dhigtaan qeyb ka mid ah noloshooda.
Haddii aad buugaag badan guriga keensato, suuragal ma aha inaad hal mar wada aqriso. Qeyb qeyb u aqri buugaagta kuu taalla laakiin marnaba ha geynin qolka jiifka. Sababtoo ah xilliga aad jiif isku diyaarisay ayaad arkeysaa buug ay sheeko macaan kaaga socotay, sidaas ayaadna ku dhafretsaa.
7- Cuntooyinka fudud
Qolkaaga jiifka ka ilaali cuntooyinka fudud, maxaa yeelay xilliga hurdada ayaad billaabeysaa inaad wax cunto, taasoo aan u wanaagsaneyn caafimaadkaaga.
Taas waxaa sii dheer in meesha ay cuntada taallo ay soo raacayaan cayayaan ayna yeelaneyso bakteeriyo iyo jeermis labadaba.
Waxaa kale oo suuragal ah in marka aad sariirtaada saaran tahay, oo ku mashquulsan tahay telefoon aya telefishin aad cuneyso wax badan adigoo aad dareemeynin in calooshaada ay xadkeeda dhaaftay.
Previous articleDabeecadahan wanaagsan ee Islaamka ma leedahay?
Next articleHabeenka 15-ka bisha Shacbaan arrintan samee (waa caawa)
Dabeecadaha ugu soo jiidashada badan (iyo sida lagu yeesho)